लण्डनबारे जान्नुहोस् केही नौला कुराहरु
विश्वकै चर्चीत सहरको रुपमा परिचीत छ लण्डन सहर । यो सहरको जनसंख्या करिब १४ मिलियन रहेको छ । विभिन्न देशहरुबाट यो सहरमा बस्न
नयां शक्ति निकट आईएनएस यूकेमा नयां कार्यसमिति चयन
साधारणसभाले चन्द्र गुरुङको अध्यक्षतामा समाजको नयां कार्यसमिति चयन पनि गरेको छ । कर्यसमितिको उपाध्यक्षमा थम बि क, हेम गुरुङ, डा. दिलिप कुमार यादव, दिपक गैरे र श्रीमती सकुन्तला गुरुङ चयन भएका छन् ।
बेलायतको विद्यार्थी भिसाका लागि २६ देशलाई विशेष प्राथमिकता
यो विशेष सुविधालाई बेलायतले अब यसअघिका १५ देशबाट बढाएर २६ देशसम्म फैलाउने घोषणा गरेको छ । नयां सुचीमा चीन, बहराइन, सर्विया लगायतका देशहरु थपिएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन ) यूकेले आउंदो जुलाई २९ मा लण्डनको लर्ड्स क्रिकेट मैदानमा नेपालले खेल्ने क्रिकेटमा सहभागिताको लागि बेलायतबासी नेपालीहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
विदेशिएका नेपालीमाथि किन खनिन्छन् मन्त्री पण्डित ?
लन्डन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित एकपटक फेरि चर्चामा छन् ।
‘संखुवासभाको शान, संखुवासभाली हाम्रो पहिचान’
संखुवासभा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् संखुवासभालीहरुको एक आवश्यकता ।
विश्वकपमा इंग्ल्याण्डले गर्यो विजयी सुरुवात
सोमबार ट्युनिसिया विरुद्धको खेलमा इंग्ल्याण्डले २ -१ को जित हात पार्यो ।